Myanmar – NU MYAT AROUND THE WORLD
April 23, 2022 Posted in Myanmar, UncategorizedTagged MyanmarLeaveacomment
ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ နေ့ချင်းပြန်ဖြစ်ဖြစ် ညအိပ်ဖြစ်ဖြစ် ခရီးထွက်ချင်တယ်ဆိုရင် နေပြည်တော်ကိုလည်း မမေ့သင့်ပါဘူး။ နေပြည်တော်က အချက်အချာကျတဲ့နေရာမှာရှိလို့ ရန်ကုန်ကနေပဲသွားသွား၊ မန္တလေးကနေပဲ သွားသွား နီးပါတယ်။နေပြည်တော်က မြန်မာပြည်ရဲ့ မြို့တော်ဖြစ်သလို မြို့သစ်ကြီးလည်းဖြစ်တော့ နေရာတိုင်းက သန့်ပြန့်ခမ်းနားနေပါတယ်။ နေပြည်တော်သွားမယ်ဆိုရင် တစ်ညအိပ်ဆို ကောင်းကောင်းလည်လို့လောက်ပါတယ်။ အစုံလည်းရောက်ချင်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး သွားချင်ရင်တော့ နှစ်ညအိပ်လောက်သွားရပါမယ်။
နေပြည်တော်မှာ ဖူးမြော်နိုင်တဲ့ ဘုရားစေတီတွေအနက် ဥပါတသန္တိစေတီတော်ရဲ့ အနက်အဓိပါယ်က “ဖြစ်ပေါ်ကြုံတွေ့လာသည့် ဘေးအန္တရာယ်အားလုံး ငြိမ်းအေးစေခြင်း”ပါတဲ့။ စေတီတော်ကို ရန်ကုန်မြို့ကရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးနဲ့ ပုံစံတူ ဉာဏ်တော်အမြင့်အောက်(၁)ပေလျှော့ပြီး တည်ထားခဲ့တာပါ။ အရှေ့ဘက်မုခ်မှာ ဆင်ဖြူတော်တွေ မွေးထားပါတယ်။
မဟာသကျရံသီ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကတော့ ဉာဏ်တော်အမြင့် ၃၂ပေရှိတဲ့ ရပ်တော်မူရုပ်ပွားတော်ကြီးဖြစ်ပြီး စကျင်ကျောက်ရပ်တော်မူ ဆင်းတုတော်ကြီးတွေထဲမှာ ဉာဏ်တော်အမြင့်ဆုံးပါတဲ့။ တောင်ပေါ်မှာရှိလို့ တောင်ပေါ်ကနေလည်း နေပြည်တော်ရှုခင်းတွေ လှမ်းမြင်ရသလို ညနေနေဝင်ချိန်ရှုခင်းလည်းသိပ်လှပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရန်အောင်ချမ်းသာဘုရား၊ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးစေတီတော်နဲ့ ရန်အောင်မြင်စေတီတော်တို့ကိုလည်း ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။ နေပြည်တော်ပုဂံဆိုတာကတော့ ရှေးဟောင်းစေတီတွေ စုပြီးရှိတဲ့နေရာမလို့ နေပြည်တော်ပုဂံလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာပါ။ ညောင်ပင်စု ရှေးဟောင်းစေတီတွေလို့လည်း သိကြပါတယ်။
နေပြည်တော် ဗုဒ္ဒဂါယာကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂါယာမြို့က ဗုဒ္ဒဂါယာအတိုင်း ပုံစံတူ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ဘုရားဝန်းထဲမှာ မဟာဗောဓိစေတီတော်မြတ်ကြီးအပြင် ဗောဓိပင်နဲ့ ရွှေပလ္လင်တော်နဲ့ စင်္ကြန်တော် အပါအဝင် သတ္တသတ္တာဟ (၇)ဌာနတို့ကိုလည်း ဖူးမျှော်နိုင်ပါတယ်။ နေပြည်တော် ဗုဒ္ဓဂါယာမှာ “ဖွား၊ ပွင့်၊ ဟော၊ စံ” စတဲ့ သံဝေဇနိယ လေးဌာနလုံးကို ပုံစံတူဆောက်ထားပါတယ်။ မဟာဗောဓိစေတီတော်မြတ်ကြီးကတော့ အဲ့ဒီလေးဌာနထဲက မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာ ပွင့်စေတီဌာနပါ။ ဓမ္မစကြာတရားဦး ဟောကြားရာ မိဂဒါဝုန်တော ဟောစေတီဌာန၊ ပရိနိဗာန်စံတော်မူရာ ကုသိနာရုံ အင်ကြင်းဥယျာဉ်နဲ့ စံစေတီဌာန၊ မြတ်စွာဘုရားဖွားမြင်တော်မူရာ လုမ္မနီဥယျာဉ်တော် ဖွားစေတီဌာနတို့လည်းရှိပါတယ်။
ဥယျာဉ်ကြီးတွေ အနေနဲ့ကတော့ ညနေတိုင်း မီးရောင်စုံ၊ တေးသံသာတွေနဲ့ ရေပန်းအကတွေ ကပြတဲ့ ရေပန်းဥယျာဉ်ကြီးက မြို့လည်မှာရှိပါတယ်။ ရေတံခွန်တွေ၊ မျှော်စင်တွေ၊ ကြိုးတံတားတွေနဲ့ သာယာလှတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးပါ။ အခုလောလောဆယ် မတ်လကုန်အထိ ပန်းပွဲတော် ကျင်းပနေလို့ သွားကြည့်သင့်ပါတယ်နော်။
အမျိုးသားအထိမ်းအမှတ်ဥယျာဉ်ကတော့ မြန်မာပြည်မြေပုံအတိုင်း မြောက်ဖျားကနေ တောင်ဖျားအထိ အထိမ်းအမှတ်နေရာတွေကို သေချာဆောက်ထားတာပါ။
တိရစ္ဆာန်လေးတွေ ကြည့်ချင်ရင် တိရစ္ဆာန်တွေကို သဘာဝအတိုင်း လွှတ်ထားတဲ့ နေပြည်တော် ဆာဖာရီဥယျာဉ်ကြီးနဲ့ နေပြည်တော် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားပရဆေးဥယျာဉ်ကတော့ ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေ စိုက်ထားတဲ့ ဧက ၂၀၀ခန့်ရှိဥယျာဉ်ကြီး ပါ။ ကျောက်စိမ်းတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ကျောက်စိမ်းဥယျာဉ်လည်း ရှိပါတယ်။
လေ့လာစရာ ပြတိုက်တွေအနေနဲ့ကတော့ မြို့ထဲမှာဆိုရင် အမျိုးသားပြတိုက်နဲ့ မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာပြတိုက်တို့ ရှိပါတယ်။ တပ်မတော် စစ်သမိုင်းပြတိုက်က တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နားမှာရှိပြီး နက္ခတာရာပြခန်းကတော့ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတာပါ။
အနီးအနားက အပန်းဖြေစခန်းတွေအနေနဲ့ ပျဉ်းမနား-ပင်လောင်းကားလမ်းပေါ် တောင်ကျရွာအနီးမှာရှိတဲ့ နေပြည်တော် ရေပူစမ်း၊ ပေါင်းလောင်းမြို့ ကနေ လှေစီးပြီးသွားနိုင်တဲ့ နမ့်မွန်ကြီးရေတံခွန်၊ နေပြည်တော်ကနေ နာရီဝက်မောင်းရင်ရောက်တဲ့ လှေခွင်းတောင်နဲ့ တောင်ခြေမြစ်ဘေးကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းတွေနဲ့ ငလိုက်ကန်သာ အပန်းဖြေဥယျာဉ်စခန်းတို့ကိုလည်း သွားရောက်နိုင်ပါတယ်။
April 23, 2021 April 24, 2021 Posted in Myanmar, Travel, UncategorizedTagged MyanmarLeaveacomment
အိမ်လေးတွေသာဆိုတယ် တကယ်က စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေပါ။ ဆိုင်နာမည်လေးတွေမှာ House တို့ အိမ်တို့ပါတာကြောင့် အိမ်လေးတွေလို့ ချစ်စနိုးခေါ်လိုက်တာပါ။ အဲ့ဆိုင်လေးတွေက ဆောက်ထားတာလည်းဆန်းလို့ ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ ပျော်စရာပေါ့။ ဒီအိမ်(၄)အိမ်အကြောင်းဖတ်ကြည့်ပြီး ဘယ်အိမ်အကြိုက်ဆုံးလည်း ပြောကြည့်ကြည့်နော်။
သစ်ပင်အိမ် (Little Tree House Restaurant)
စိတ်ကူးတွေထဲကလို သစ်ပင်အိမ်လေးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သစ်ပင်ပေါ်ဆောက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ သစ်ပင်ကြီးဘေးမှာ ဝါးတွေကိုသုံးပြီးဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးပါ။ အိမ်လေးက သဘာဝဆန်ဆန်လေးနဲ့ သိပ်ဆန်းတာ။ ထိုင်းဗိသုကာပညာရှင်တွေဆောက်ပေးထားတာတဲ့။ ဝါးအိမ်လေးက ၃ထပ်တောင်ရှိတာနော်။ အပေါ်ဆုံးထပ်ကတော့ ခပ်သေးသေးရယ်ပေါ့။ အဲ့ကနေ ရှုခင်းတွေကြည့်လည်းရတယ်။
အိမ်အပေါ်ထပ်ကို စားစရာတွေတင်တဲ့နည်းကလည်းမိုက်တယ်။ စက်သီးနဲ့ အတင်အချလုပ်တာ။ အစားအသောက်ကတော့ရောက်မှ ချက်ပေးတာဆိုတော့ နည်းနည်းတော့စောင့်ရမယ်။ စောင့်ရင်း ဟိုရိုက်ဒီရိုက်လုပ်ပေါ့။
အိမ်နားမှာ ဝါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကစားကွင်းတွေလည်းရှိတယ်။ ဝါးလျှော၊ ဝါးဒန်း၊ ဝါးစီးဆောလေးတွေနဲ့ ပျော်စရာကြီး။ အနားမှာ ယက်ကန်းရုံလည်းရှိတော့ ယက်ကန်းခတ်တာလည်း တစ်ခါတည်းလေ့လာလို့ရတယ်။ ညမှောင်ရိပ်သန်းရင်မီးလေးတွေလင်းလာတဲ့အခါ ပိုတောင်လှသေးတယ်။ ပုံပြင်တွေထဲရောက်သွားသလိုပဲ။ အရမ်းသဘောကျတာ။
ညအိပ်ချင်ရင်တော့ သစ်ပင်အိမ်ဘေးက A Little Ecolodge ဟိုတယ်လေးမှာ တည်းလို့လည်းရတယ်။ လိပ်စာက ညောင်ရွှေမြို့ကနေ မိုင်းသောက်သွားတဲ့လမ်းပေါ် ညောင်ဖြူရွာနားမှာရှိပါတယ်။ ညောင်ရွှေမြို့ကနေ ၅မိနစ်လောက်သွားရင်ရောက်ပါတယ်။ အင်းလေးမြင်းစီးကွင်းသွားရာလမ်းမှာရှိတဲ့ A Little eco Lodge ဝင်းအတွင်းမှာပါ။ ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့ 09428363692 နဲ့ 09426649846 တို့ပါ။
လယ်တောအိမ် (La Rizieဲre Buvette)
လယ်တောအိမ်လေးကလည်း Tree House လိုပဲ ဝါးတွေနဲ့ဆောက်ထားတာ ။ စိမ်းစိုနေတဲ့စိုက်ခင်းတွေကြားက ဝါးနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ နှစ်ထပ်အိမ်လေးကို သိပ်သဘောကျတာပဲ။ ဒါကကျတော့ ပြင်သစ်ဒီဇိုင်းလက်ရာလေးပါတဲ့။ ပြင်သစ်နာမည်လေးကတော့ La Rizieဲre Buvette Restaurant and Sunset Bar တဲ့။ လယ်တောအိမ်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးအတိုင်း ဝင်သွားလို့ရှိရင် ဘယ်ဘက်မှာ ခေါင်မိုးချွန်ချွန်နဲ့တစ်ထပ်အိမ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ဘယ်ဘက်မှာတော့ ဝါးလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့ နှစ်ထပ်အိမ်လေးရှိပါတယ်။ တစ်ထပ်အိမ်အလယ်မှာ Open Kitchen ကိုဝိုင်းထိုင်လို့ရတဲ့ Bar လေးရှိပြီး နှစ်ထပ်မှာကျတော့ ဝါးစားပွဲလေးတွေနဲ့ အေးဆေးစားလို့ရပါတယ်။ ဝါးနင်းသံတဂျွတ်ဂျွတ်နဲ့ ဝါးကြမ်းခင်းပေါ်ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချပြီး တမျှော်တခေါ်မြင်ရတဲ့ စပါးခင်းစိမ်းစိမ်းစိုစိုကြည့်ရတဲ့ Feel က အရမ်းမိုက်တာနော့။ အစားအသောက်တွေကလည်း မှာမှ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ချက်ပေးတာ။ ဒေသထွက်အသီးအနှံလေးတွေနဲ့ဖျော်ပေးတဲ့ Cocktail ကလည်း ကောင်းမယ့်ပုံပဲ။ Sunset လေးကြည့်ရင်း Cocktail လာသောက်ကြတယ်တဲ့လေ။ နုမြတ်တို့ကတော့ နေ့လည်ဘက်ရောက်သွားလို့ နေ့လည်စာဝင်စားခဲ့ကြတာ။
အဲ့မှာအကြိုက်ဆုံးက အိမ်သာလေးပဲ။ ဟိုးအစွန်ဆုံးက ခရုပတ်ပုံဆောက်ထားတဲ့ ဝါးအိမ်သာမှာတံခါးမရှိသလို ပြတင်းပေါက်လေးလည်းထားပေးတော့ စိမ်းစိမ်းစိုစိုရှုခင်းတွေကြည့်ရင်း အေးအေးဆေးဆေးထိုင်လို့ရတာပေါ့ 😂မိန်းမအိမ်သာဆီ အလွယ်တကူလာလို့မရအောင် ဝါးတံတားလေးကို ခြံတံခါးလို ပိတ်နိုင်အောင် ထွင်ထားတာလေးလည်း သိပ်သဘောကျတယ်။
လိပ်စာကတော့ အင်းလေးမရောက်ခင် ညောင်ရွှေကနေ ခေါင်တိုင်သွားတဲ့လမ်းလေးပေါ်မှာရှိတာပါတဲ့။ ညောင်ရွှေလှေဆိပ်မရောက်ခင်လေးတင်ပါပဲ။ ရှာမရရင် ဒီဖုန်း 09787230306 ကို ဆက်မေးကြည့်ပါ။
စက်ဘီးအိမ် (MOT Café)
ဒီအိမ်လေးကတော့ အပြာနုလေးတစ်အိမ်လုံးသုတ်ထားပြီး စက်ဘီးအဖြူလေးတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတာ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ ခြံစည်းရိုးမှာလည်း စက်ဘီးအဖြူလေးတွေ၊ အိမ်နံရံမှာလည်း စက်ဘီးအဖြူလေးတွေ၊ စက်ဘီးအဖြူလေးတွေကို ပဒေသာပင်လိုတောင် အဆင့်ဆင့်တင်ထားတာ။ သဘောကျလိုက်တာ။ ဆိုင်အပေါ်ထပ်တက်မယ့်လှေကားနားမှာလည်း ပန်းရောင်နဲ့ အစိမ်းရောင်သုတ်ထားတဲ့ ဆိုက်ကားလေးတွေထားပေးထားတယ်။
ဆိုင်အထဲမှာတော့ အစိမ်းနုရောင်အခန်းလေးမှာ ပန်းလေးတွေနဲ့ ဥယျာဉ်ထဲရောက်သွားသလို ချစ်ဖို့ကောင်းနေပြန်ရော။ အသေးစိတ်ကအစ သေချာပြင်ဆင်ထားလို့ အရမ်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းမယ့်ဆိုင်လေးပေါ့။
ဆိုင်နာမည်က MOT တဲ့။ ကိုရီးယားကလာဖွင့်ထားတာ။ သူက အနားက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက် Charity သဘောမျိုးဖွင့်ထားတာတဲ့။ လာအားပေးတဲ့ ပိုက်ဆံတွေအကုန် ကျောင်းရန်ပုံငွေထဲ လှူပေးတာဆိုတော့ ကောင်းလိုက်တာနော်။ ဖွင့်တာတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးလို့ အစားအသောက်ကတော့မရသေးဘူး။ အအေးနဲ့ကော်ဖီပဲရပါသေးတယ်။
လိပ်စာကတော့ အင်းလေးအသွားလမ်း ညောင်ရွှေအကျော် မိုင်းသောက်တံတားမရောက်ခင် လမ်းဘယ်ဘက်မှာတင်ရှိပါတယ်။
ကော်ဖီအိမ် (Coffee House)
ဒီဆိုင်လေးလည်း ဖွင့်တာသိပ်မကြာသေးပါဘူး။ နေရာကလည်း Little Tree House အကျော်လေးမှာပါ။ Inle Horse Club မရောက်ခင်မှာရှိပါတယ်။
သူကတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးကို ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ ဘားဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာပါ။ အင်းလေးကန်ကို မြင်ရတဲ့ ရှုခင်းက သိပ်လှပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ ဆည်၊ တစ်ဖက်မှာ အင်းလေးကန်နဲ့ သိပ်ကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ အိမ်လေးပါ။ နေသာတဲ့နေ့တွေမှာ အဲ့အိမ်လေးကနေမြင်ရတဲ့ Sunset View လေးကလည်း သိပ်ကို မိုက်တာပဲတဲ့။
အဲ့မှာ ဝိုင်တွေကော်ဖီတွေအပြင် အစားအသောက်လည်းရပါတယ်။ နဂါးမောက်သီးဖော်ရည်ကတေ့ာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ စပျစ်ခြံနဲ့ နဂါးမောက်ခြံရှိတာဆိုတော့ ခြံထွက် စပျစ်ဖျော်ရည်၊ နဂါးမောက်ဖျော်ရည်က လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပေါ့။
လိပ်စာကတော့ ညောင်ရွှေမြို့ကနေ မိုင်းသောက်သွားတဲ့လမ်းပေါ် ညောင်ဖြူရွာနားမှာရှိပါတယ်။ Inle မြင်းစီးကွင်းသွားတဲ့လမ်းမှာ Little Tree House အကျော် Inle Horse Club မရောက်ခင်မှာရှိပါတယ်။ ဖွင့်ချိန်က မနက်၉ကနေည၆နာရီထိပါ။ ဖုန်းနံပါတ် 09 787 230306 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကဲဒီအိမ်လေးတွေကတော့ နုမြတ် 2018 က သွားခဲ့တဲ့ ညောင်ရွှေ-အင်းလေးခရီးမှာ သဘောကျခဲ့တဲ့ ဆိုင်လေးတွေပေါ့။ တခြားဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းမယ့် စားလို့ကောင်းမယ့်ဆိုင်လေးတွေရှိရင်လည်း လမ်းညွှန်ပါဦးနော်။ ဒီဆိုင်လေးတွေကိုလည်း အကြိုက်တွေ့ရင် Like and Share လုပ်နိုင်ပါတယ်။
January 20, 2017 April 20, 2021 Posted in Myanmar, Natural Wonder, Travel, UncategorizedTagged adventure, Andaman Sea, Asia, Beach, Kaw Thaung, Myanmar, Nature, Nu Myat around the World, Sea, Travel, UnderwaterLeaveacomment
နေသာသာ ရေပြာပြာ နေ့ရက်များ”
Jumping on Satan Island
🌞မြန်မာပြည်ထဲမှာ အရမ်းလှတဲ့ ရေအောက်ရှုခင်းတွေ စရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ ကြည့်ခဲ့တယ် … 🌊စိမ်းပြာရောင်အသည်းပုံလေးဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်းလေးထဲက အသည်းပုံပင်လယ်လေးထဲလည်း ရေဝင်ကူးခဲ့တယ်
🌞မြန်မာတောင်ဘက်အကျဆုံး ဘုရင့်နောင်အငူလည်းရောက်ခဲ့တယ် … 🌊ဖြူလွှနူးညံ့နေတဲ့သဲသောင် ကမ်းခြေလှလှလေးမှာလည်း ခုန်ပေါက်ခဲ့တယ် …
ဒီလောက်လှတဲ့ အရာတွေ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ရှိနေတာ ဂုဏ်ယူစရာပါ။ ကော့သောင်းခရီးစဉ်ကလည်း တကယ်ကို ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ အဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ခုလို ဆောင်းပါးလေးရေးပေးထားတယ်နော့… စိတ်ဝင်စားရင် ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါကြောင်း…
စာဖတ်ပျင်းသူတွေအတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်နဲ့ သွားမယ့်လမ်းကြောင်းတွေ၊ အချက်အလက် အကျဉ်းချုပ်တွေပါ နောက်ဆုံးမှာ ရေးပေးထားတယ်။
Underwater of Kyat Mout Island
🌞ပထမနေ့ (Day 1 )
(ရန်ကုန်-ကော့သောင်း-မလိဝမ်းရေတံခွန်- သဘာဝရေပူစမ်း- သူဌေးကျွန်း)
ရန်ကုန်ကနေဆိုရင် ကော့သောင်းကို လေယာဉ်နဲ့ သွားလို့ရပါတယ်။ Air KBZ, MNA စတဲ့ Airline တွေ ပြေးဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကတော့ စီစဉ်တာရက်ကပ်လို့ လက်မှတ်ရတဲ့ Air KBZ နဲ့ သွားဖြစ်ပါတယ်။ မွန်းတည့် ၁၂ထွက်ပြီး ညနေ၃နာရီမှာ ရောက်ပါတယ်။ ကြားမှာ ထားဝယ်နဲ့ မြိတ်တို့မှာ ၂ခါရပ်ပါတယ်။ ၁ခါရပ် ၁၅မိနစ်လောက်သာကြာတာပါ။ ခဏခဏ ရပ်ပေမဲ့ လေယာဉ်တစ်ခါတက်တိုင်း မုန့်နဲ့ အအေးတစ်ခါ ထပ်ကျွေးတော့ မစားနိုင်တော့တဲ့ အထိပါပဲ။
လေယာဉ်ပေါ်က မြင်ရတဲ့ ထားဝယ်ရှူခင်းတွေ မြိတ်ရှူခင်းတွေ ကလည်း သွားလည်ချင်စရာပါ။ ကော့သောင်းနားရောက်လေလေ လေယာဉ်ပေါ်က မြင်ရတဲ့ ရှူခင်းတွေက ပိုပို လှလာလေပါ။ တောင်တွေနားကပ်လာပြီး တောင်တွေ ကျော်လာတဲ့ အခါ မြင်ရတဲ့ ရှူခင်းတွေက အံ့အားသင့်စရာပါ။ စိမ်းပြာရောင်ရေပြင်ကျယ်ကြီးတွေ ကြားက ကျွန်းစုလေးတွေ ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်နဲ့ ဆင်းခါနီးလေ ရင်ခုန်လေပါပဲ။
ကော့သောင်းလေဆိပ်ကို Grand Andaman Hotel က ကားနဲ့လာကြိုပေးပါတယ်။ လေဆိပ်ကနေ မလိဝမ်းကျေးရွာနားရှိ မလိဝမ်းရေတံခွန်ကို တန်းသွားပါတယ်။ မလိဝမ်းကို ကော့သောင်းကနေ ၁နာရီလောက်မောင်းရပါတယ်။ အစီအရီပေါက်နေတဲ့ ရာဘာတောကြီးတွေ၊ ဆီအုန်းပင်ကြီးတွေကို တရိပ်ရိပ် ဖြတ်ကျော်လာပြီးနောက်မှာ ရောက်ပါပြီ။ ရေတံခွန်ဆီ မရောက်မီ ရေတံခွန် အပေါက်နားကနေမြင်ရတဲ့ ကုန်းမြင့်စိမ်းလေးပေါ်က ဘန်ဂလို ဖြူဖြူလေးဆီ သွားတဲ့ လမ်းလေးက လှလွန်းလို့ ဓာတ်ပုံတွေ အပြိုင်အဆိုင် ရိုက်ကြပါရော။ ဂိတ်ဝ၊နားနေလေသာဆောင်၊ စားသောက်ဆိုင်လေးတွေ၊ တံတားလေးတွေ ဖြတ်ကျော်လာပြီးနောက် ရေတံခွန်အောက်ခြေနား ရောက်ပါပြီ။ ရေတံခွန် အသေးလေးတွေ ရှိနေတဲ့ ရေပြင်ထဲ ဘောကွင်းနဲ့ ရေဆော့သူတွေလည်း တွေ့နေရပြီ။ လှေနီနီလေးတွေလည်း စီတန်းထားရဲ့။ ကျွန်မတို့လည်း ဘေးနားက ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ကြ ရေလေးတွေကို လက်နဲ့ဆော့ကြပေါ့။ တကယ့်ရေတံခွန်ကြီးသွားမယ်ဆိုရင် မိနစ်၂၀လောက် တောလမ်းအတိုင်းလျှောက်ရမယ်တဲ့။ အဲ့နေရာက အများကြီး ပိုလှတာ ပုံတွေထဲ မြင်ဖူးပေမဲ့လည်း အချိန်မရှိလို့ မသွားတော့ဘဲ နောက်တစ်နေရာကို ကူးကြရပြန်ပါတယ်။
Maliwun Waterfall gate
Maliwun Waterfall , Myanmar
Maliwun Waterfall Myanmar
မလိဝမ်းသဘာဝရေပူစမ်းက ရေတံခွန်နဲ့ ကပ်ရပ်မှာ မဟုတ်ဘဲ အဲ့ရောက်ဖို့ ကားနဲ့ ၁၅မိနစ်လောက်ထပ်သွားရပါတယ်။ ရေပူစမ်းကလည်း အံ့သြစရာပါ။ စက်ဝိုင်းပုံစံ ရေကန်ထဲ စက်ဝိုင်းအလည်ကို ဗဟိုပြုကာ အကန့် ၃ကန့်ခွဲထားပါတယ်။ ၁ကန့်နဲ့ ၁ကန့် ရေအပူချိန်မတူပါဘူး။ 40C 45C 55C ဆိုပြီး အပူချိန်ကွဲနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကတော့ ခုမှရောက်လို့ 40C မှာသာ ခြေထောက်စိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခဏတာသာ စိမ်ခဲ့ပေမဲ့ အညောင်းအညာတွေ ပြေသွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
Maliwun natural spring
Rubber Trees near Kaw Thaung
Grand Andaman Gate
လှေဆိပ်ကနေ ကျွန်းပေါ်အဝင်မှာ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတွေ့လို့လည်း အံ့သြမိပါရဲ့။ သူဌေးကျွန်းက ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းမြို့နဲ့လည်း နီးတော့ ရနောင်းကလာရင် ၇မိနစ်ထဲမောင်းရပါတယ်။ ထိုင်းတွေ မကြာခဏလာလည်လို့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဌာန ထားပေးရတာပါ။ ဟိုတယ်က ထင်ထားတာထက်ပို ခမ်းနား ပိုပြည့်စုံနေတာ အမှန်ပါ။ ပင်လယ်ကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့ ရေကူးကန်ကြီးကလည်း ဟိုတယ်ကြီးရဲ့ အလှကို ပံ့ပိုးနေလေရဲ့။ Dinner Buffet ကလည်း ကောင်းမှကောင်း။ ထိုင်းစာကြိုက်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ရှယ်ပေါ့။ ပင်လယ်စာတွေကို ထိုင်းစတိုင်ချက်ထားတာ ပြန်တွေးရင်တောင် တံတွေးမြိုမိတဲ့အထိ။ ညစာ Buffet က ဘတ် ၃၅၀ပါ။
ဟိုတယ်က ၂ယောက်ခန်းကို ၁ညကို $120 ကနေ $400 ထိ အစားစားရှိပါတယ်တဲ့။
🌞ဒုတိယနေ့ (Day2)
(သူဌေးကျွန်း- မြင်းခွာကျွန်း-ကြက်မောက်ကျွန်း-စေတန်ကျွန်း-ဇာဒက်ကြီးကျွန်း )
ထိုင်းအချိန် မနက် ၉နာရီမှာ ကျွန်းလေးကျွန်းပတ် ထွက်ဖို့ Lobby မှာ လူစုပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာ တည်းတဲ့သူတွေရော မတည်းတဲ့ သူတွေပါ သူဌေးကျွန်းလှေဆိပ်မှာ ဆုံပြီး ထွက်ရပါတယ်။ ကျွန်းလေးကျွန်းခရီးစဉ် Package ကို ဒီ Hotel ကပဲစီစဉ်ပြီး လိုက်ပို့ပေးတာမို့လို့ လှေဆိပ်မှာ လိုက်မယ့်သူတော်တော်များပါတယ်။ ကျွန်မတို့ထွက်မယ့်နေ့မှာ အယောက် ၁၀၀လောက်ရှိပါတယ်။ Speed Boat တွေ ၃စီး ခွဲပြီး သွားရပါတယ်။ ကျွန်းသွားတဲ့ Package ကို ဘတ် ၃၉၀၀ (ကျပ်၁သိန်းခွဲနီးပါး) နဲ့ ရောင်းပြီး ကျွန်းပေါ်က နေ့လည်စာ၊ ဟိုတယ်က ညစာ Buffet ရယ်၊ ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ရေကူးကန်သုံးခွင့် Sauna သုံးခွင့်တွေပါပါပါတယ်။ Speed Boat ခရော၊ Snorkeling လုပ်တဲ့အခါ အသုံးပြုတဲံ ရေအောက်ကြည့်မျက်မှန်၊ Life Jacket၊ နည်းပြ၊ ရေ၊ အအေး၊ သစ်သီး Facility အစုံပေးထားပါတယ်။ Speed Boat မှာ အိမ်သာလည်းပါလို့ အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။
Speed boat to go islands
အရင်ဆုံးသွားမယ့်ကျွန်းတွေနဲ့ ခရီးစဉ်ကို ဂိုက်က မြေပုံနဲ့ တကွ ရှင်းပြပေးပါတယ်။ သူဌေးကျွန်းကနေ အဲ့ကျွန်းတွေရောက်ဖို့ ၁နာရီလောက် မောင်းရပေမဲ့ အဲ့ကျွန်းတွေက တစ်ကျွန်းနဲ့ တစ်ကျွန်း Speed boat နဲ့ ၁၀မိနစ်လောက်သာ သွားရတာပါ။ အရင်ဆုံး စေတန်ကျွန်းမှာ ကပ်ပြီး Lunch စားဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ ယူလာတဲ့ အစားအစာတွေ အရင်ချပါတယ်။ ပင်လယ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ ကမ်းခြေရှုခင်းက အတော်လေးလှပါတယ်။ ပြာလဲ့နေတဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကြီး နောက်ခံမှာ စိမ်းညှို့နေတဲ့ တောအုပ်လေးရယ် သူ့ရှေ့မှာ ဖြူလွှလွှသဲသောင်ပြင်ရယ် စိမ်းပြာရောင် ကြည်လင်လှတဲ့ ပင်လယ်ကြီးရယ်နဲ့ လှချင်တိုင်းကို လှနေတာပါ။ စေတန်ကျွန်းလေးက ခုပဲ ပြေးဆင်းချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်နေပေမဲ့ အရင်ဆုံး တခြားကျွန်းတွေမှာ Snorkeling လုပ်မယ်ဆိုတော့ ဆန္ဒတွေ ပြန်မျိုချခဲ့ရပါတယ်။
ပထမဆုံးသွားတာက မြင်းခွာကျွန်းပါ။ အဲ့ကျွန်းကမ်းခြေက မြင်းခွာပုံ ရှိနေလို့ မြင်းခွာကျွန်းလို့ ခေါ်တာပါတဲ့။ အဲ့ကျွန်းမှာ ကမ်းခြေဆီ မကပ်ပဲ ကျွန်းနားက ရေထဲ Snorkeling လုပ်ကာ ငါးကြည့်ဖို့ ရပ်ပေးပါတယ်။ ရေထဲမဆင်းမီ Snorkeling ရေအောက်ငါးကြည့်မျက်မှန်တပ်နည်း၊ ပါးစပ်နဲ့ အသက်ရှူနည်းတွေ သေချာသင်ပေးပါတယ်။ စစချင်းတော့ ခက်သလိုရှိပေမဲ့ အကျင့်ရှိသွားရင် ရှူရတာ လွယ်လွယ်လေးပါ။
ရေမကူးတတ်သူတွေဆိုလည်း မပူပါနဲ့။ ဂိုက်က ရေကူးရေငုပ် ကျွမ်းကျင်ပြီး အသက်ကယ်အင်္ကျီအပို၂စုံလောက်ချပေးထားလို့ အဲ့ဒါကို ကိုင်ပြီး ရေပေါ်ပေါ်ကာ အသာလေး လိုက်သွားရုံပါပဲ။ ဂိုက်ကရေအောက် သန္တာကျောက်တန်းတွေ လှတဲ့ ဘက်ကို အုပ်စုလိုက် ဆွဲခေါ်သွားပေးတော့ ရေအောက် ရှူခင်းတွေ ကြည့်ပြီး အသာအယာ လိုက်ရုံလေးပါပဲ။ စစချင်းရေထဲဆင်းရင်တော့ ကြောက်လိမ့်မယ်။ ကိုယ့်အောက်က ကြမ်းပြင်ကြီးက အနက်ကြီးကိုး။ ရေတွေကလည်း ကြည်နေတော့ အောက်ထိ တိုးလျှိုပေါက် မြင်နေရတာ ရင်ထိတ်စရာပါ။ အဲ့ ကြောက်စိတ်လေးတွေ ဖျောက်နိုင်ရင်ရပြီ။ တချို့ဆို ဆင်းဆင်းချင်း တအားကြောက်ပြီး Speed Boat ပေါ် ပြန်တက်သွားတော့ ရေအောက်အလှတွေ မကြည့်ရတော့ဘူးပေါ့။ မတန်ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် ခဏတာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကြောက်စိတ်လေးတွေ ဖျောက်ပြီး ပျော်ပျော်ကြီး လိုက်သွားကြပါလို့။ ရေမကူးတတ်တဲ့ သူတွေတောင် Snorkeling အရသာတော်တော်တွေ့သွားကြတယ်လေ။
Us underwater of Andaman Sea
Heart shaped Island, Cock Island ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း Myanmar Andaman Sea
ကျွန်းမှာ ကမ်းမရှိဘူး။ ကျွန်းလယ်က အသည်းပုံထဲ ရောက်ဖို့ ရေကျချိန်မှာ ကျောက်ဆောင်အောက် ကျောက်ဆောင်အောက်ကနေ ဝင်ရပါတယ်။ Speed Boat ကနေ ကျွန်းလယ်ထဲထိ ကြိုးဆွဲပေးထားလို့ ကြိုးကိုင်ပြီး သွားရတာလွယ်တယ်။ ရေကြောက်လို့ တခြားနေရာမှာ မဆင်းရဲရင်တောင် ဒီကျွန်းမှာတော့ ဆင်းကြည့်သင့်ပါတယ်။ ရေအောက်က သိပ်မနက်ဘူး။ အသည်းပုံထဲ တချို့နေရာတွေဆို အရပ်မြင့်သူတွေ ခြေဖျားထောက်လို့တောင်ရတယ်။ ချစ်သူ၂ဦးတူတူလာရင် တစ်သက်မကွဲဘူးတဲ့လေ။ Honeymoon ခရီးစဉ်မှာ အသည်းပုံကျျွန်းလေးဆီသွားရင် Very Romantic ပေါ့။ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာပါ 😀
Going inside the heart
ကျွန်းတွေမှာ ရေငုပ် ငါးကြည့်ပြီးတော့ ဗိုက်တော်တော်ဆာနေပါပြီ။ စေတန်ကျွန်း Dunkin Island မှာ ကြိုဆင်းနေတဲ့အဖွဲ့က ထမင်းစားဖို့ အသင့်ပြင်ထားပေးတယ်။ အဲ့ ကျွန်းမှာ လူမနေတော့ အားလုံးက သဘာဝဆန်ဆန် အရိုင်းဆန်ဆန်လှနေတာ။ အမှိုက်တွေ ဆိုလည်း ဘာဆိုဘာမှမရှိ။ သန့်နေတာပဲ။ Grand Andaman ရဲ့ ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းမှုကြောင့်လည်းပါမယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အဲ့ကျွန်းမှာ Tent ထိုးပြီး အိပ်လို့ရအောင် စီစဉ်နေတယ်ဆိုပဲ။
အဲ့ကျွန်းမှာ အထူးခြားဆုံးကတော့ သဲသောင်ပြင်လေးပါ။ Speed Boat ပေါ်က ဆင်းဆင်းခြင်း သိသိသာသာကြီးကို သဲတွေ က အိစက်နေတာပါ။ တကယ်ကို မွမွလေးတွေ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကရေကရာမုန့်က အမှုန်လေးတွေလို နူးနူးညံ့ညံ့လေး။ စားချင်စိတ်တောင်ပေါက်တယ်။ တကယ်။ 😛
soft white sand of Dunkin Island Myanmar
Happy Jump on Dunkin Island or Satan Island
သဲလေးတွေ မွမွလေးတွေဆိုတော့ ကလေးတွေလို ခုန်ပေါက်ချင်ပြီပေါ့။ ကျွန်မတို့ အရွယ်တွေတင် မဟုတ် အတူပါလာတဲ့ ၆၀ကျော် အရွယ် ဖေဖေတို့မေမေတို့ Uncle တို့စုံတွဲတာင် ခုန်ပေါက်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေ အရိုက်ခံနေကြတာ တကယ် လူငယ်လေးတွေလိုပဲ။ သူတို့ကိုကြည့်ပြီး အပျော်တွေတောင်ကူးစက်မိတယ်။ တကယ်။ 😀
စေတန်ကျွန်းမှာ ကျောက်ဆောင်လေးတွေကလည်းလှ၊ သစ်ပင်တွေမှာ ဒန်းလေးတွေလည်း လုပ်ပေးထားတော့ ကျွန်မတို့လို ပဲမမတွေ အကြိုက်ပေါ့လေ
Swing like an islander
rocks on Dunkin Island
ဒီကျွန်းကတော့ နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့ လွယ်ဆိုသလို ရေအောက်ရှုခင်းတွေ အလှဆုံးပါတဲ့။ ညွှန်းသလောက် တကယ်လည်း လှပါရဲ့။ ကျောက်ခတ်တွေ သန္တာကျောက်တန်းတွေဆို ကိုယ်နဲ့ နီးနီးလေးလိုပဲ။ ရင်သက်ရှုမော စရာပါ။
ဟိုတယ်ကို ပြန်ရောက်တော့ ညနေစောင်းပြီ။ ဟိုတယ်မှာ မတည်းတဲ့ သူတွေ ကိုပါ ကျွန်းခရီးစဉ်လိုက်ရင် ရေကူးကန်နဲ့ Sauna သုံးခွင့်ပေးထားတော့ အုံးအုံးကြွက်ကြွက်ကို စည်ကားနေတာ။ ရောက်ရောက်ချင်း ပင်လယ်ရေတွေ ဆေးချ ရေချိုးပြီး အညောင်းအညာပြေအောင် Sauna ထဲ ဝင်ထိုင် ပြီးမှ ရေတစ်ခါပြန်ချိုး အဝတ်အစားလဲပြီး ညစာ သွားစားကြတယ်။ Massage လုပ်ချင်ပေမဲ့ လူတွေ များနေတော့ မလုပ်လိုက်ရဘူး။ အဲ့နေ့ကတော့ တကယ်အိပ်လို့ကောင်းတယ်။
🌞Day3တတိယနေ့
(Grand Andaman Adventure Club- ကော့သောင်း-ဘုရင့်နောင်အငူ-ပြည်တော်အေးစေတီ-ငါးသုံးလုံးတောင်-ရန်ကုန်)
ဒီ Grand Andaman Hotel ကို ကြိုက်တဲ့ အချက်နောက်တစ်ချက်က နိုင်ငံခြားမှာလို Adventure တွေမျိုးစုံ လုပ်လို့ရလို့ပါ။ သူဌေးကျွန်းလယ်တောင်ပေါ်က Adventure Club ကို ကားနဲ့တက်သွားလို့ရတယ်။ အဲ့မှာ တာဇံလို အရှိန်နဲ့ ကြိုးခိုပြီး စီးရတဲ့ Zip Line ရှိတယ်။ အမြင့်ကြီးကနေ ဟိုး…မျက်စိတဆုံးအထိ စီးရတာနော်။ သစ်ပင် တစ်ပင်နဲ့ တစ်ပင် ကြိုးတံတားတွေ ဘောကွင်းတွေ ဘားတန်းတွေ နဲ့ အမျိုးမျိုး စွန့်စွန့်စားစား သွားရတာလည်းရှိတယ်။ ကိုယ့်အောက်မှာ တောအုပ်တွေဆိုတော့ ရင်တထိပ်ထိပ်ပေါ့။ ပင်လယ်ပြင်ရှုခင်းနောက်ခံပြီး စွန့်စွန့်စားစားတွေ လုပ်နေရတော့ တာဇံလိုလို၊ ကျွန်းပေါ်သောင်တင်နေသူလိုလို Feeling က တအားမိုက် 😀
Adventure on Tha Htay Island
ကျွန်းအနှံ့ ဘီးအကြီးကြီးတပ်ထားတဲ့ တောနင်းယာဉ် (ATV) ကိုယ်တိုင်မောင်းလို့လည်းရတယ်။ မမောင်းတတ်ရင် သူတို့လိုက်မောင်းပို့ပေးတယ်။ ATV စီးပြီး View Point မှာ ရပ်ပေးတော့ မြင်ရတဲ့ ရှူခင်းက ရင်သပ်ရှူမောဖွယ်ရာပါ။ ကော့သောင်းမြို့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က တောင်တန်းလေးတွေပါ ပြပြလေး လှမ်းမြင်နေရတာ… View Point နားက သစ်ပင်တွေကလည်း ထူးဆန်းတယ်။ သစ်ကုလားအုပ်လို ဖြစ်နေတာ။ Adventure Club မှာ Activities တွေ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘတ် ၁၅၀၀ (မြန်မာငွေ ၅သောင်းဝန်းကျင်လာက်) ကျပါမယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာ Organic စိုက်ခင်းတွေလည်း ရှိပြီး နောက်ဆို Hotel မှာ ကျွေးတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ၊ သုံးတဲ့ ဆပ်ပြာတွေ အကုန် ကျွန်းထွက် ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲ Organic လုပ်မှာတဲ့..
Grand Andaman Viewpoint
Hotel မှာပဲ Buffet Lunch စားပြီးတော့ လေဆိပ်မဆင်းခင် ကော့သောင်းမြို့ထဲ သွားလည်ခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တောင်ဘက်အကျဆုံးကုန်းမြေဖြစ်တဲ့ ဘုရင့်နောင်အငူ (အရင် ဝိတိုရိယအငူ) ကိုတော့ မရောက်မဖြစ်ပေါ့။ ငါဟာ အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ ခြေချောင်းထိပ်လေးဆီ ရောက်နေတာပါလားဆိုတဲ့ Feeling လေးက တစ်မျိုးလေးပါပဲ… ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင့်နောင်ရုပ်တုကြီးကလည်း ငါတို့ မြေကို လာမထိနဲ့ ဆိုပြီး ပင်လယ်ဘက်ကို မျှော်ကာ ရန်သူတွေကို ကာကွယ်ပေးနေသယောင်ယောင် ထင်မှတ်မိလေရဲ့ …
ကျွန်မတို့က ၂ညအိပ် ၃ရက်ပဲ အချိန်ရတော့ ဒီနေရာလေးတွေပဲ လည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အချိန်ရမယ် ဆိုရင် ကော့သောင်းမြို့နားက ပုလုံးတုံးတုံး ကမ်းခြေက တအားလှတယ်ဆိုပဲ။ ညောင်ဦးဖီးကျွန်းနဲ့ အနားတဝိုက်က ကျွန်းတွေကလည်း သွားရတာ ဝေးပေမယ့် သာယာတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကို ကူးပြီး ရနောင်းမြို့ သွားလည်လည်း ရပါတယ်။ တခြားလည်စရာ နေရာတွေ သိလည်း Comment မှာ အကြံပေးကြပါဦးနော်။
-ရေမကူးတတ်လို့၊ ရေ ကြောက်လို့ဆိုပြီး ရေထဲ မဆင်းဘဲ မနေပါနဲ့။ ရေမကူးတတ်လည်း ဆင်းလို့ရပါတယ်။ မဆင်းလိုက်ရရင် နောင်တရနေမှာနော်
-ရေကူးတတ်ပေမဲ့လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကူးမနေပဲ ရေငုပ်သမားခေါ်သွားတာနောက်လိုက်ပါ။ သူတို့က ဘယ်နေရာမှာ ဘာရှိလဲ ဆိုတာ သိနေတတ်လို့ပါ။ သူတို့တွေ ရေထဲ ငုပ်ငုပ်သွားတာ ကြည့်ရတာလည်း ဆပ်ကပ်ကြည့်နေရသလိုပါပဲ
-ထိုင်းတွေ အလာများလို့ ထိုင်းဘတ်တွေ သုံးပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ဘတ်ငွေတွေ ရှိရင် ယူသွားပါ။ သုံးလို့ရပါတယ်။ လက်ရှိ ဘတ်ငွေပေါက်ဈေး ၁ဘတ် = ၃၇ကျပ်
-အချိန်ကလည်း ထိုင်းနဲ့ နီးလို့ ထိုင်း အချိန်ကို ယူတတ်ကြပါတယ်။ ထိုင်းအချိန်က မြန်မာအချိန်ထက် နာရီဝက်စောပါတယ်။ ဥပမာ- မြန်မာမှာ မနက်၉နာရီဆို ထိုင်းအချိန်က ၉နာရီခွဲပါ။ ဒီတော့ အချိန်ပြောရင် ထိုင်းအချိန်လား မြန်မာ အချိန်လားဆိုတာကို သေချာအောင်မေးပါ
-ဖုန်းကတ်က MPT သာမိလို့ MPT card ရှိရင်ယူသွားပါ။ Ooredoo ကတော့ တစ်ခါတလေ မိပါတယ်။
-ရေအောက်ရိုက်တဲ့ ကင်မရာရှိရင် ယူသွားပါ။ ရေအောက်ရှုခင်းတွေ တအားလှပါတယ်။ ဖုန်းတွေကိုလည်း ရေစိုခံအိတ်နဲ့ ထည့်ထားပါ။
-နေအရမ်းပြင်းတော့ အသားနေမလောင်အောင် နေပူခံ ရေစိုခံ Sunscreen တွေ ဆောင်သွားပါ။
-Hotel က Thai Massage Spa မှာ နှိပ်တဲ့သူ ၄ယောက်ပဲရှိလို့ ကျွန်းသွားတဲ့နေ့တွေမှာ ပင်ပန်းပြီး အနှိပ်ခံတဲ့သူများလို့ လူကျတတ်တယ်။ Massage ကြိုက်ရင် ကြိုပြီး Booking တင်ထားပါ။
-Hotel မှာ တည်းရင် တစ်ရက်ကို ကျွန်းပတ်ခရီးစဉ်နဲ့ တွဲယူပါ။ ပိုသက်သာလို့ပါ။ ကျွန်းပတ်ခရီးစဉ်နဲ့တွဲယူရင် တစ်ယောက်ကို ဘတ် 1000 ပဲ ပိုပေးရတော့ ၂ယောက်ဆို ဘတ် 2000 (ကျပ် ၇၅၀၀၀ လောက်) သာကျမှာပါ။ ပုံမှန်က ဟိုတယ်တစ်ညကို $120 ( ကျပ် ၁သိန်းခွဲကျော်) ပေးရတော့ ထက်ဝက်ကျော်သက်သာလို့ပါ။
ကုန်ကျစရိတ် – ၂သိန်းကျော်မှ ၆သိန်းထိ
ခရီးစဉ်ရက် – ၂ညအိပ် ၃ရက် or 3ညအိပ် ၄ရက်
ကော့သောင်းမြို့ – ဘုရင့်နောင်အငူ၊ ဘုရင့်နောင်ရုပ်တု၊ ပြည်တော်အေးစေတီတော်၊ ငါးသုံးလုံးတောင်၊ ပုလုံးတုံးတုံးကမ်းခြေ
သူဌေးကျွန်း၊ ကြက်မောက်ကျွန်း၊ စေတန်ကျွန်း၊ ညောင်ဦးဖီးကျွန်း
မလိဝမ်းရေတံခွန်၊ မလိဝမ်း သဘာဝရေပူစမ်း
ကော့သောင်းမြိတ်ကျွန်းစုလှတယ်သာသိတာ။ ဒီလောက် သွားလာရလွယ်မယ်။ တိုးတက်နေမယ်လို့ မထင်ထားတာ အမှန်ပါ။ ခုလို ပွင့်လင်းရာသီမှာ Honey Moon ထွက်လိုတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုလိုက် ပျော်ပျော်ကြီး သွားလိုတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Anniversary ရက်တွေ တူတူ ဆင်နွှဲလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူကဲလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပင်လယ်နဲ့ ကမ်းခြေကို ချစ်ပြီး ရေအောက်အလှတွေ မြင်တွေ့လိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုင်ငံခြားကို ဈေးကြီးပေးပြီး သွားစရာ မလိုဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲမှာပဲ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ သွားလည်နိုင်တာ ကျေနပ်စရာပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေတောင် တကူးတကလာပြီး Snorkeling လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ စိတ်ကြီးဝင်မိပြီပေါ့။ တချို့ဆို တစ်ရက်နဲ့ မဝလို့ နောက်တစ်ရက်တောင် ထပ် Join တယ်ဆိုပဲ။ 😀
အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်…
ဒီ Post ကို လွတ်လပ်စွာ Share နိုင်ပါတယ်။ ပုံနဲ့ စာတွေ ယူသုံးခြင်းတော့ ခွင့်မပြုပါ။
Drone ပုံတွေ အသုံးပြုခွင့်ပေးပြီး ကော့သောင်းမြို့ကို လာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ သွားခဲ့တဲ့ရက်တိုင်းမှာလည်း ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ခဲ့တဲ့ Grand Andaman Hotel မှ တာဝန်ရှိသူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
All photos with Nu Myat around the World logo are taken and copyrighted by Nu Myat. Feel free to share this post. But not allow to use the photos and words without my permission.
January 20, 2017 April 20, 2021 Posted in Adventure, Asia, Myanmar, Travel, UncategorizedTagged Asia, kayah, kayan, loi kaw, Myanmar, Nature, Travel1 Comment
ကိန္ဒရီ ကိန္ဒရာမြို့တော်လွိုင်ကော်ရောက် နေ့ရက်များ…
Triplet me in Kayan outfit
ကြေးကွင်းစွပ် ကယန်း(ပဒေါင်)လူမျိုးတွေရဲ့ ရွာ…. ပဟေဌိဆန်ဆန် အခေါင်းတွေ ပြည့်နေတဲ့ ကြတ်ဂူ… ထီးပွင့်လိုရေတွေပွက်ပွက်လာတဲ့ ထီးပွင့်ကန်… ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ တောင်ကွဲစေတီရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းဒဏ္ဏာရီလာ ဒွေးမယ်နော်တို့ပျော်စံရာ ကယားပြည်နယ်မှာ လည်စရာတွေ ထင်ထားတာထက်ပိုများနေပါတယ်။
၂ညအိပ် ၃ရက် Non Stopသွားတာတောင် လည်စရာမကုန်နိုင်ပါ။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ နေရာ စုံသွားချင်ရင် ၃ညအိပ် ၄ရက် Or ၄ညအိပ်၅ရက်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။
ကဲ..နုမြတ်နဲ့ အတူတူ Online ပေါ်ကနေ ကယားပြည်အနှံ့ ခြေဆန့်ကြည့်ကြရအောင်နော်…
Going to Kayah with MNA Myanmar National Airline at Yangon Domestic Airport
မနက် ၉နာရီထွက်တဲ့ MNA လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ ထွက်လာခဲ့တာ မနက် ၁၀နာရီမှာ လွိုင်ကော်ကို ရောက်ပါတယ်။ လေယာဉ်ခက အသွား ၆၃၀၀၀ နဲ့ အပြန် ၆၁၀၀၀ဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၁၂၄၀၀၀ ကျပ်ပေါ့။ လွိုင်ကော်ကို တိုက်ရိုက်ရောက်ပါတယ်။ လေယာဉ်တစ်စီးလုံး အပြည့်။ ထင်တောင်ထင်မထားဘူး။ အများစုက နိုင်ငံခြားသားတွေ။ ကိုရီးယား တစ်အုပ်စု ပါလာတာလည်းတွေ့ရတယ်။ စိတ်ထင် ကယန်းလူမျိုးတို့ ရှေးကယားလူမျိုးတို့လို လူမျိုးစုတွေ နေထိုင်ရာ ရွာတွေကို စိတ်ဝင်စားလို့ လာလေ့လာကြတာထင်တယ်။
လေဆိပ်မှာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Amazing Kayah Travel & Tour ကနေ ကားနဲ့လာကြိုပါတယ်။ ကားက ၈ယောက်စီးကားကြီးပါ။ သွားမယ့်နေရာတွေပေါ်မူတည်ပြီး တစ်နေ့ကို ၈သောင်းကနေ ၁သိန်းလောက်ကျပါတယ်။ ဆီခနဲ့ ဒါရိုင်ဘာခပါအပြီးပေါ့။ ကျွန်မတို့က နေမယ့်ရက်နည်းပြီး သွားချင်တဲ့ နေရာများတော့ ဟိုတယ်မှာ Check In အရင်မဝင်ဘဲ လည်စရာရှိတာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခုလည်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လေဆိပ်က မြို့တော် လွိုင်ကော်နဲ့ မဝေးပါဘူး။ ခဏလေးနဲ့ရောက်ပါတယ်။ လွိုင်ကော်မြို့ရဲ့ First Impression ကတော့ အေးချမ်းသန့်ရှင်းတဲ့ မြို့လေးလို့ထင်မိပါတယ်။ ထင်ထားတာထက် ပိုသန့်ရှင်းလှပသလားလို့။ လမ်းလေးတွေက ကတ္တရာလမ်းခင်းထားပြီး ရွှေရောင် ကိန္ဒရီ ကိန္ဒရာမောင်နှံ ရုပ်တ ုအဝိုင်းပတ်လေးက ကယားအငွေ့အသက်ပေးနေလေရဲ့
အရင်ဆုံး လေဆိပ်ကနေ လောပိတရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံဆီကို သွားခဲ့ကြပါတယ်။ လွိုင်ကော်ကနေတစ်နာရီကြာမောင်းရပြီး လမ်းတလျှောက်တောတောင်ရှုခင်းတွေက လှမှလှ။ View Point မှာရပ်ပေးတော့ ဓာတ်ပုံတွေ ဆင်းရိုက်ကျသေးတာပေါ့။ လမ်းဘေးတလျှောက်ရေပိုက်ကြီးတွေတွေ့ကတည်းက စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီ။ ငယ်ငယ်က ကျောင်းတုန်းက ခဏခဏသင်ရတဲ့ လောပိတရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံကို ရောက်တော့မှာကိုး။
Viewpoint on the way in Kayah, Myanmar
ဘီလူးချောင်း အမှတ်(၂) ဓာတ်အားပေးစက်ရုံလို့ခေါ်တဲ့ လောပိတရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံက အကြီးကြီးပါ။ အရင်က မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေးဖို့လုံလောက်ပေမဲ့ ခုတော့ ဘယ်ရတော့မလဲ။ အစစအရာရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်ရှိမှ နေတတ်တဲ့ ခေတ်…မီးကိုအားကိုးတဲ့ ခေတ် ဖြစ်နေတာကိုး။ စက်ရုံထဲမှာ ၂၈မဂ္ဂါဝပ် စက်ကြီး ၆လုံးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ၃လုံးကဂျပန်တွေ စစ်လျော်ကြေးအဖြစ် ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ သုံးလုံးကတော့ အစိုးရက ထပ်ဝယ်ပြီး ဖြည့်ထားတာပါတဲ့။ စုစုပေါင်း ၁၆၈ မဂ္ဂါဝပ်ရှိပေမဲ့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးလိုတဲ့ လျှပ်စစ်အားက ၁၆၀၀ လောက်ရှိနေတာဆိုတော့ တခြားရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွေကနေပါ လျှပ်စစ်အားရယူရတာပေါ့
Law Pi Ta Hydroelectropower
လျှပ်စစ်စက်ရုံကနေ ၁၅မိနစ်လောက်လျှောက်သွားရင် ရေတံခွန်ဆီရောက်ပါတယ်။ လူမလာတဲ့နေရာမှာ ရှိတော့ တကယ့် သဘာဝအတိုင်းပါပဲ။ သာယာချက်က ရေလေးတွေဆို စိမ်းပြီး ကြည်နေတာ။ ငါးအုပ်လေးတွေဖြတ်ကူးနေတာ အသေးစိတ်တွေ့ရတယ်။ ရေကြည်ချက်က ရေအောက်ကြမ်းပြင်ထိ တိုးလျှိုပေါက်…အင်းလေးကန်ကနေ မိုးဗြဲဆည် အဲ့ကနေ ဘီလူးချောင်းဟောင်းတလျှောက်စီးဆင်းလာပြီး ရေတံခွန်ကို ဖြတ်ကာ သံလွင်မြစ်ထဲ စီးဆင်းသွားတာတဲ့။
Law Pi Ta Natural Waterfall
မြို့ထဲပြန်ရောက်တော့ နေ့လည် ၁နာရီခွဲပြီဆိုတော့ ဗိုက်ဆာပြီပေါ့။ အဲ့တော့ ကယားရိုးရာစာမစားသေးဘဲ အမြန်ရတဲ့ မြန်မာဆိုင်မှာ စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ အတော်ကောင်းတဲ့ မြန်မာဆိုင်ပါ။ ရွှေလက်ရာတဲ့ ဆိုင်နာမည်က။ လွိုင်ကော်မှာ နာမည်ကြီးပေါ့။ တို့စရာတွေဆို ရှယ်ပဲ။ ဟင်းရည်တွေ အရံဟင်းတွေက ကောင်းမှကောင်း။ ဟင်းပွဲမမှာစားဘဲ အရံဟင်းတွေနဲ့တင် တင်းတိမ်နေပြီ… အဲ့ထဲမှာ ဂျူးမြစ်နဲ့ ပုစွန်ချဉ်သုပ်လေးတော်တော်ကောင်းတယ်။
Myanmar Vegetables and fish paste
ဗိုက်ဝတော့ ကယားရဲ့ နာမည်ကျော် ကြတ်ဂူဆီ ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပဟေဌိတွေ ပြည့်နေတဲ့ ဂူလို့လည်း ပြောရမှာပါ။ သဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ ကျောက်ဂူကြီးတွေထဲမှာ သစ်သားအခေါင်းပျက်တွေ တောက်လျှောက်အစီအရီ ရှိနေတာ အတော်ကို ထူးဆန်းပါတယ်။ နာမည်ကြီးကလည်း ကြတ်ဂူဆိုတော့ နာနာဘာ၀ ကြတ်တွေနေထိုင်ရာဂူများလားတွေးမိရင်း ကြောထဲစိမ့်တတ်လာမိတာပေါ့လေ…
Kyat Cave Catacomb in Kayah, Myanmar
ဂူက ကျောက်တောင်အမြင့်ပေါ်ရှိပြီး ဂူအပေါ်တက်တဲ့ လှေကားရင်းက ကြတ်ဂူဆိုင်းဘုတ်မှာ ရေးထားတာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၇၀က ဒီ အခေါင်းတွေထဲ အရိုးစုတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဝင်ကြည့်တော့ အရိုးစုတွေ မရှိတော့ဘဲ ပျက်စီးနေတဲ့ ခေါင်းတလားတွေသာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ တချို့အပြောကတော့ အဲ့ကတည်းက အရိုးတွေကို စုပြီး သဂြိုဟ်ပေးလိုက်လို့ မရှိတော့တာတဲ့။ ရှေးခေတ်ကြတ်လူမျိုးတွေက သေတဲ့အခါ ဂူထဲလာထည့်လေ့ရှိတယ်တဲ့လေ။ အခေါင်းတွေက ၂ပေကနေ ၁၅ပေအရှည်ထိရှိကြပြီး အရင်က ကျောက်နံရံတွေမှာ ကပ်ပြီး ထောင်ထားကြသလို မျက်နှာကျက်မှာလည်း ချိတ်ဆွဲထားကြတယ်။ မျက်နှာကျက်မှာ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အခေါင်းတစ်ခုကို အခုထိတွေ့မြင်နိုင်ပြီး အဲ့ထဲမှာတော့ အရိုးစုတွေ ရှိနေသေးလား မပြောတတ်ဘူးပေါ့လေ။
ကြတ်ဂူကြီးက တော်တော်ကို နက်ပါတယ်။ ကျောက်တောင်အောက်ခြေက ဘုန်းဘုန်းကို ဝင်ဖူးပြီး လေ့လာချင်ကြောင်း အကျိုးအကြောင်းပြောပါက မီးစက်ထွန်းပေးပါလိမ့်မယ်။ မဟုတ်ရင် မှောင်ထဲ မဲထဲ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနဲ့ အခေါင်းတွေကြားဖြတ်ရမယ့် အဖြစ်ပါ။ မီးစက်က ပေ၂၀၀၀ အထိသာမီးသွယ်ထားတာပါ။ အရှည်က ဘယ်လောက်ထိရှည်လည်း မသိဘူး။ မနှစ်က ဂျပန်တစ်ဖွဲ့ အောက်ဆီဂျင်ဘူးတွေနဲ့ မနက် ၆နာရီက ထွက်သွားတာ ညနေ၆နာရီမှာ ပြန်ရောက်လာကြတယ်။ အဆုံးထိမရောက်ခဲ့ကြဘူးတဲ့လေ။ ကျွန်မတို့ကတော့ ပေ၁၂၀၀ အထိပဲရောက်ခဲ့တယ်။ တခြားလည်း သွားစရာတွေ ရှိသေးတော့လေ။ ပေ ၁၀၀၀ မှာတော့ အခေါင်းပျက်တွေ အများကြီးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
တချို့ကတော့ ဒါလူသေအလောင်းထည့်ရာ အခေါင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့လေ။ ယမ်းတွေကို သစ်သားခေါင်းတွေထဲ ထည့်ပြီး ဂူထဲ သိုလှောင်ထားကြတာလို့လည်း ပြောကြပါတယ်။ ဘယ်အယူအဆမှန်လဲ ဆိုတာကတော့ မျက်နှာကျက်ကနေ ပြုတ်မကျသေးဘဲ ကျန်နေတဲ့ အခေါင်းကို ဖွင့်ကြည့်မှသာ သိရမှာပါ။
ဘယ်ဒေသပဲရောက်ရောက် အဲ့ဒေသရဲ့ ပြတိုက်မှာ လေ့လာစရာ အများကြီးပါ။ ကယားမှာရောပဲပေါ့။ ဝင်ကြေးကလည်း ၅၀၀ကျပ်ပဲဆိုတော့ ဝင်ကြည့်သင့်တာပေါ့။ ပြတိုက်က အဆောက်အအုံကြီးပေမဲ့ ပြခန်းကတော့နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကယန်း၊ ကယော၊ ရှေးကယားစတဲ့ လူမျိုးစုတွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုတွေ၊ Life style တွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေ၊ တူရိယာပစ္စည်းတွေ ပြသထားတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ…
Kayah Culture Museum
လွိုင်ကော်မြို့ရဲ့ နာမည်ကျော် ရှေးဟောင်းတောင်ကွဲစေတီဟာ မြို့ထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ အက်ကွဲနေတဲ့ ကျောက်တောင်တွေလို့ ပြောရမလား။ တကွဲတပြားစီ ထိုးထောင်ထွက်နေတဲ့ ကျောက်တောင်တွေလို့ ပြောရမလား မသိ။ ကျောက်တောင်တစ်ခုစီထိပ် စေတီတွေ တည်ထားတာကလည်း ထူးခြားနေပါတယ်။ ကျောက်တောင်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကူးဖို့ တံတားတွေ၊ တောင်ပတ်လမ်းတွေလည်း ဖောက်ထားသေးတယ်။ တောင်ကွဲစေတီရင်ပြင်ပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်ရတဲ့ လွိုင်ကော်မြို့ရှုခင်းက လှမှလှ… မှိုင်းပြတဲ့ တောတောင်နောက်ခံမှာ ရောင်စုံအိမ်လေးတွေ အစီအရီ။ တချို့တောင်ထိပ်တွေမှာ ဘုရားကျောင်းဆောင်တွေ၊ အဆောက်အအုံကြီးတွေနဲ့ပေါ့… တကယ်သာယာပါတယ်
Taung Kwal Pagoda, Loi Kaw, Myanmar
With my sis and my dad in front of Taung Kwal Pagoda
View of Loi Kaw from Taung Kwal Pagoda
အရင်က စော်ဘွားဟော်နန်းကိုလည်း ရောက်ခဲ့သေးတယ်။ နောက်ဆုံးစော်ဘွားက ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လှူခဲ့လို့ အခု ဘုန်းကြီးတွေ သီတင်းသုံးနေထိုင်နေပါတယ်။ သီရိမင်္ဂလာပုံကျောင်းလို့ အမည်ရပါတယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ နှစ်ထပ် ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီး လှေကားတက်တက်ခြင်းကတော့ ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါ့။ မြောက်နန်းစံမိဖုရားခန်းအပြင်ဘက် လက်ယာဘက်လျှောက်လမ်းနံရံမှာ ကယားစော်ဘွားတွေပုံတွေ ပြသထားလေရဲ့။ ဟော်နန်းကြီးရဲ့ အခန်းဖွဲ့စည်းပုံပြ Floor planကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ စော်ဘွားတွေ ဆင်စီးရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့စင်၊ မှန်စီရွှေချခဲ့ဖူးတဲ့ လူထမ်းဝေါယာဉ်တွေကိုရောပေါ့
Ancient Kayah Haw Palace
မြို့ထဲက တန်ခိုးကြီး မြို့နာမ်စေတီကိုလည်း သွားဖူးသင့်ပါတယ်
Myo. Nam Pagoda
မြို့လည်က နောင်ယားကန်က ရေတွေကလည်း ကြည်လင်ပြီး ငြိမ်သက်နေလို့ မှန်လိုမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ကန်ကို ဖြတ်ဆောက်ထားတဲ့ ရောင်စုံလက်ရန်းတွေနဲ့ သစ်သားတံတားလေးနဲ့ ပနံကို သင့်လို့။ ကန်ဘေးမှာ စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း ရှိတော့ အဲ့ညက ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ အဲ့ဆိုင်တွေထဲက တစ်ဆိုင်မှာ ကယားစာတွေ စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကယားသွားတုန်းက ဘာတွေစားပြီး ဘယ်တွေ သွားရင်ကောင်းမလဲ Post တင်ပြီး မေးခဲ့တုန်းက Comment တွေ အကြံပေးထားတာတွေ မှာပစ်လိုက်တယ်။ ဖင်ကနေစုပ်စားရတဲ့ ဖင်ချွန်းခရုစွပ်ပြုတ်… တစ်ပွဲမှ ၅၀၀ ၁၀၀၀လားရယ် ခရုလေးတွေအများကြီးပါတယ်။ စွပ်ပြုတ်ရည် အရသာကလည်း ကောင်းမှကောင်း…. မစားမဖြစ် ကယားဝက်အူချောင်း၊ ဝက်ရိုးရာဟင်း၊ ငါးခဲပတ် အကုန်စားလို့ အရသာရှိမှရှိ…
Naung Yar Lake is in the middle of Loi Kaw, Capita of Kayah State in Myanmar
လွိုင်ကော်ကနေ ဒီမောဆိုမြို့ သွားတဲ့လမ်း ဘယ်ဘက်ဘေးမှာ ငွေတောင်ဆည်ရှိပါတယ်။ လယ်ဧကများစွာကို ရေပေးဝေပေးနေတဲ့ ဆည်ကြီးပေါ့။ အဲ့ဆည်တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ တောင်သုံးလုံးလှမ်းမြင်နေရတယ်။ ရွှေတောင်၊ ငွေတောင်၊ ပတ္တမြားတောင်တွေတဲ့။ ရွှေတောင်ထိပ်မှာ ဒွေးမယ်နော် ခိုနားလေ့ရှိတယ်တဲ့။ ဆည်ကြီးကလည်း ရှုခင်းတွေသာယာပါတယ်
Ngwe Taung Dam is important for agriculture in Kayah
3 mountains names Gold mountain, Silver mountain and Ruby mountain far behind. Hence the name of the dam is Ngwe taung which means silver mountain
Kayan lady selling handmade scarves
အဲ့ကနေဆက်သွားတဲ့အခါ ဒီမောဆိုမြို့မဈေးရောက်ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ ၃ရက်ပဲဖွင့်တဲ့ ဈေးကြီးပါ။ တနလာၤ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ စနေ သုံးရက်ပဲ ဖွင့်တာပါတဲ့။
Do Maw So local market opens only on Monday, Wednesday and Saturday
ဈေးထဲမှာ လည်ပင်းကြေးကွင်းစွပ်ထားတဲ့ ကယန်းအမျိုးသမီးကြီးတွေက ကိုယ်တိုင်ရက်ထားတဲ့ ချည်ပုဝါတွေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ကယန်းလူမျိုးအရုပ်နဲ့ သံလိုက်တွေ၊ ကြေးလက်ကောက် ငွေလက်ကောက်ကွင်းတွေ ပျားရည်တွေ ထိုင်ရောင်းနေကြတယ်။ ကိုယ်ကလည်း သူတို့ကို ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တော့ ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ အရိုက်ခံနေကြတယ်လေ… အင်းပေါ့ ဧည့်သည်တိုင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုခံယူရတာ သူတို့လည်း နေသားကျနေပါပြီ။ အားနာလို့ရော လိုချင်လို့ရော Magnet တစ်ခု၊ ပျားရည်တစ်ပုလင်း အားပေးလိုက်တယ်။ Magnet က ၅ထောင်တောင်၊ ပျားရည်ကတော့ ၁၅၀၀ ထဲ
Colorful Handmade scarves and Kayan magnet
အဲ့ဈေးမှာ ခေါင်ရည်တန်းလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ရောင်းသူတွေ အစီအရီထိုင်ပြီး ခေါင်ရည်ထည့်ထားတဲ့ ရေသန့်ဗူးကိုယ်စီ ရှေ့ချထားပြီး ရောင်းနေမကြတာ။ အနားစသွားကပ်တော့ ခွက်ထဲ ထည့်ခိုင်းပြီး မြည်းခိုင်းတယ်။ မက်မန်းဝိုင်လို ချိုချိုမွှေးမွှေးလေး.. တစ်ဗူးမှ ၂၀၀၀ ကျပ်ထဲ။
Khaung Yay , the local alcoholic drink is one of the main attractions of the local market
Community Based Tourism(CBT) လို့ခေါ်တဲ့ ကျေးရွာလူထုအခြေပြု ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ ကယားမှာ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက ်ကျေးရွာတွေထဲ လူနည်းစုတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝတွေကို အိမ်တိုင်ရာရောက် သွားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ပန်ပက်ရွာကတော့ ကယန်းလူမျိုးတွေ နေထိုင်တဲ့ရွာပါ။ အဲ့ရွာက ကယန်းအမျိုးသမီးကြီးတွေ နေအိမ်တွေကို သွားကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပုဝါတွေယက်တဲ့အိမ်ရယ် ငွေထည်လက်မှုပစ္စည်းတွေ လုပ်တဲ့ အိမ်ရယ်ပါ။
ကယန်းအမျိုးသမီးကြီးတွေက ဖော်ဖော်ရွေရွေရှိပါတယ်။ မြန်မာလိုတော့ မပြောနိုင်ကြဘူး။ ဧည့်သည်တွေ၊ ကင်မရာတွေကိုလည်း စိမ်းမနေတော့ဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုနေတတ်နေပြီ။ အင်းပေါ့လေ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဧည့်ခံရတဲ့ ဧည့်သည်တွေကလည်း နေ့တိုင်းကိုး… ငွေထည်အိမ်က အဘွားဆို Telenor ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရထားတာ။ အဘွားက သီချင်းဆိုတာလည်းကောင်းတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဂစ်တာတီး သီချင်းဆိုပြတယ်လေ…
Kitchen of the local Kayan house in Pan Pat Village
Playing music with the ladies
Smile of Kayan lady
ရွာနားက ဈေးဆိုင်တန်းအရှည်ကြီးမှာတော့ ရိုးရာလက်မှုထည်တွေ၊ ဒေသထွက်စားသောက်ကုန်တွေ၊ ကယန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေ ဝယ်လို့ရတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ သူတို့ရိုးရာ ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတာကိုပဲ။ ဝတ်စုံဖိုးပေးစရာမလိုဘူး။ တစ်ခုခုပြန်အားပေးလိုက်ရင်ရပြီ။ သူတို့လိုလည်ပင်း ကြေးကွင်းစွပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်။ တကယ့်ကြေးကွင်းတော့ ဘယ်စွပ်လို့ရမလဲနော်။ ကြေးကွင်းတွေက တအားလေးတာကိုး… ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လှရုံလောက် ရှေ့တစ်ဝက်ကို ကြေးကွင်းတွေ ထပ်ပေးထားပြီး နောက်တစ်ဝက်ကို ဖဲကြိုးချည်ပေးထားတာ… တစ်ဝက်တောင်တော်တော်လေး…. ခေါင်းငုံ့လို့မရ မော့လို့မရနဲ့ ဇက်ကြောတွေတက်လာတာ… ဒီလောက်လေးလံတဲ့ ကြေးကွင်းကြီးတွေ အပျိုဖော်ဝင်စကတည်းက စွပ်လာခဲ့တဲ့ သူတို့တွေကို လေးစားမိပြီပေါ့
Me and my sis wearing Kayan traditional costume andabrass neckpiece
Us with long neck Kayan tribe lady
ကိန္ဒရီ နတ်သမီး၇ဖော် ရေချိုးခဲ့တဲ့ ကန်၇ဆင့်ကို ဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ကန်လေးတွေ သေးသေးလေးလောက်ပဲ ထင်ခဲ့တာ။ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။ ကန်ကြီးတွေက အကြီးကြီး…၇ကန်ဆက်နေတာ။ အဲ့ထဲက ၆ဆင့်မြောက်ကန်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ကန်နားမှာ စားသောက်ဆိုင်လည်း ရှိသလို ကန်စပ်မှာ ထိုင်ဖို့ တဲလေးလေည်း လုပ်ပေးထားတယ်။ နိုင်ငံခြားတွေမှာလို ကန်ထဲ ဝါးဖောင်စီးတာတို့ လှေစီးတာတို့လို Activity တွေ လုပ်ပေးထားရင်း သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်။ အနားမှာ ကယား ဒဏ္ဏာရီလာသူရဲကောင်း ဖိုးဗျားရဲ့ ခြေတံရှည် ရိုးရာအိမ်ကိုလည်းရှိတယ်။ သံမသုံးဘဲ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
on the bank of 6th lake among7lakes in Kayah
Traditional house of mythical hero Phoe Byar beside the 6th lake
ဒီကန်ကတော့ တကယ်ထူးဆန်းပါတယ်။ မီးတောင်ဟောင်း ဖြစ်တဲ့ အလျောက် ရေကန်အောက်ကနေ ဂက်စ်တွေထွက်တဲ့အခါ ကန်မျက်နှာပြင်မှာ ပူစီဖောင်းလို ဖောင်းတတ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ အနီးအနားရှိ သဲတွေနုန်းတွေကို ဘေးကို ပြန့်ကျဲစေတဲ့အခါ ထီးပွင့်လို အဝိုင်းပုံ ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ သွားတုန်းကဆို ရေကန်ထဲ ဟိုနေရာပွင့်လိုက် ဒီနေရာပွင့်လိုက်နဲ့ ကြည့်ရတာ ထူးဆန်းနေတာ… တချို့ကြီးတဲ့အပွင့်တွေဆို ဗွမ်းခနဲ အသံတောင်မြည်တယ်။
Htee Pwint lake
သမိုင်းအရဆိုရင်လည်း ဒီကန်ကအရေးပါခဲ့တယ်။ နတ်သမီး၇ဖော် ရေဆင်းဆော့ခဲ့တဲ့ ဘုတ်တလုတ်ရေကန်လည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ သုဓနုမင်းသားက တွေ့ပြီး အငယ်ဆုံးနတ်သမီးလေးရဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဖွက်ထားလို့ နတ်သမီးလေး မပြန်ရရှာဘဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရေကန်က ဒီရေကန်ပါတဲ့လေ
Asaold volcano opening, gas bubbles appear on the surface of the lake occasionally
ကယားနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်စပ်မှာ ရှီတဲ့ ထီးစဲခါးရေတံခွန်ကလည်း သာယာလှပါတယ်။ ရေတံခွန်က အမြင့်ကြီးကနေ စီးကျနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေတံခွန်နိမ့်နိမ့်လေးတွေ ဟိုတစ်နေရာ ဒီတစ်နေရာ ပြန့်ကျဲနေတာ သာယာလှပါတယ်။ ရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုလုံးလှမ်းမြင်ရတဲ့ တံတားပေါ်က ကိန္ဒရီ ကိန္ဒရာ ရုပ်တုတွေ၊ ရေကန်ထဲက ရေသူမရုပ်တုတွေ၊ ဆင်ဖြူတော်ရုပ်တုတွေ နဲ့ တခြားရုပ်တုတွေ ရေတံခွန်ဝင်းအတွင်း တွေ့ရတာလည်း အမြင်ဆန်းပါတယ်။
Htee Sal Khar waterfall is on the borderline of Shan and Kayah States
ထီးစဲခါးရေတံခွန်နားမှာ ကျောက်ခတ်ပန်းဆွဲတွေလှတဲ့ အောင်သပြေဂူရှိပါတယ်။ နားပေါက်အကြီးကြီးတွေရှိတဲ့ ကယောရွာတွေ၊ တစ်ခြမ်းစောင်းအင်္ကျီတွေဝတ်တဲ့ ရှေးကယားရွာတွေသွားမယ်ဆိုရင် တစ်ရက်ပိုကုန်ပါမယ်။ အခြားလည်စရာတွေရှိသေးရင်လည်း Comment မှာ ပြောပြကြပါဦးနော်။
Mat Kar fruit is the main ingredient for Kayah dishes
making Kayah sausages
Spicy and tasty Kayah sausage is very famous local food
ရရင်ရသလို ကယားရိုးရာစာတွေစားပလိုက်တယ်။ ကယားဝက်အူချောင်းဆိုကောင်းမှကောင်း၊ ကယားမှာပဲ သုံးတဲ့ မက်ခါသီးအရသာကြောင့် စပ်စပ်မွှန်မွှန်လေးဖြစ်နေတာ။ Order မှာပြီး အိမ်ပြန်သယ်လို့လည်းရတယ်။ တစ်ပတ်လောက်ခံတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ရင် ပိုခံတယ်။ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး ၅၀၀၀ ကနေ ၁သောင်းတန်အထိရှိတယ်။
ကယားမှာ ဟင်းထုပ်တွေဆိုလည်း ကောင်းတယ်။ မြို့ထဲဆိုင် မင်္ဂလာဟင်းထုပ်ဆို နာမည်ကြီးပေါ့။ တစ်ထုပ်မှ ၁၀၀ထဲရယ်။ ၅ထုပ်ဆိုကောင်းကောင်းဝပြီ။ အထုပ်အရွယ်က ၂လုပ် ၃လုပ်စာလောက်ရှိတာပေါ့။
နောက်ပြီး ဖင်ချွန်းခရုစွပ်ပြုတ်ဟင်းရည်၊ ကယားကြက်ရိုးရာ ဝက်ရိုးရာ ဟင်း၊ ငါးခဲပတ်တွေလည်းကောင်းတယ်။ Loikaw City စားသောက်ဆိုင်ကဆို အကင်တွေကြိုက်တယ်။ ဆတ်သားထောင်းနဲ့အာလူးထောင်းရောပဲ။
‘ဒီမေားဆိုးမြို့နား ပန်ပက်ရွာသွားတဲ့လမ်းမှာ Marcopolo ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ရှိတယ်။ ဆိုင်ကမြင်ရတဲ့ရှုခင်းတွေ တအားလှတယ်။ အစားအသောက်ကတော့ တရုတ်စာပေါ့။
မြန်မာစာဆိုရင်တော့ လွိုင်ကော်မြို့ထဲက ရွှေလက်ရာဆိုင်ကောင်းပါတယ်။
Dinning room of Kayah Resort
Kayah resort also has swimming pool
တည်းခဲ့တာကတော့ Kayah Resort မှာပါ။ လွိုင်ကော်မှာ အကောင်းဆုံးလို့ ပြောရမှာပါ။ ဘန်ဂလိုအိမ်လေးတွေထဲ အခန်းကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိပြီး မနက်စာ Breakfast တွေလည်းကောင်းပါတယ်။ ရေကူးကန်လည်းရှိတယ်။
ဟိုတယ်လွိုင်ကော်၊ မြတ်နန်းတော်ဟိုတယ်၊ Loikaw Lodge by the Lake တို့လည်း မဆိုးဘူးလို့သိရတယ်
*ကြတ်ဂူမှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းဘုန်းကို ဝင်ဖူးမြော်ပြီး မီးစက်ဖွင့်ခိုင်းပါ။ မီးစက်ဖိုးလည်း ၅၀၀၀-၁၀၀၀၀ကျပ် စုပြီး ကန်တော့လိုက်ပါ။ မှောင်ထဲမှာ အခေါင်းတွေကြားဖြတ်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပေမဲ့ ဂူထဲ ဖိနပ်မစီးရတော့ ခမှောင်ထဲ ခလုတ်တိုက်တာတို့ ခဲစူးတာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မီးထွန်းထားတော့ ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတာပေ
*တောင်ကွဲစေတီရဲ့ ဓာတ်လှေကားက ညနေ၅နာရီဆို ပိတ်ပါတယ်။ ကျောက်တောင်ကို ပတ်ထားတဲ့ လှေကားတွေရှိပေမဲ့ တချို့လှေကားတွေက မတ်တော့ ဒူးနာတတ်တဲ့ လူကြီးတွေ အဆင်မပြေလောက်ပါဘူ
*ကယားဝက်အူချောင်း စားဖြစ်အောင်စားပါ။ ပါဆယ်လည်း သယ်ပါ။ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီး ၅၀၀၀ကျပ်ကနေ ၁၀၀၀၀ကျပ်အထိပေးရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်တတ်အောင် သင်လို့လည်းရပါတယ်
*ကျေးရွာတွေလေ့လာတဲ့အခါ အဖွဲ့လိုက် တစ်အိမ်ကို ကျပ် ၃၀၀၀ပေးရပါတယ်။ ၂အိမ်ဆိုတော့ ၆၀၀၀ပေါ့။ အိမ်တွေကို လိုက်ပို့ပေးတဲ့ လိုက်ရှင်းပြတဲ့ အဒေါ်ကြီးကို ၅၀၀၀ပေးခဲ့ရပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁၁၀၀၀ကျပ်ပါ။ အိမ်ပိုင်ရှင် အဖွားတွေက ၃၀၀၀မှာ ၂၇၀၀ဆီရပြီး ကျန်တာက ရွာရံပုံငွေဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့။
*ကျေးရွာသွားလည်တဲ့ အခါ အဲ့မှာ ရောင်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဈေးဆိုင်တန်းတွေမှာထက်ပိုဈေးများပါတယ်။ အဘွားတွေကို အားပေးချင်လို့ ဆိုရင်တော့ ဝယ်ပါ။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ ပစ္စည်းလိုချင်ရုံဆိုရင်တော့ ဈေးဆိုင်တန်းတွေ ရောက်မှ ဝယ်ပါ
Amazing Kayah Travek & Tour – 09 560 03
Mira Travels – 09260066697, 0950023
Kayah Resort : 09 258 887 0
ဟိုတယ်လွိုင်ကော် : 083 22 946 Ext 2294
Loikaw Lodge by the Lake : 09 263 319 79
Loikaw City Restaurant : (08) 323 051; (094) 100 765
Marcopolo Restaurant ဒီမောဆိုး : 09492 4023
ကောင်းကျော်ဟိန်းစားသောက်ဆိုင် : (09) 42 800 2355; (09) 4940 223
ရွှေရတီစားသောက်ဆိုင် : (0942) 800 1895; (092) 5403 603
ရွှေလက်ရာ မြန်မာထမင်းဟင်း : 08322528, 0925097287
Live တင်ခဲ့တဲ့ Video Links တွေ
စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခြားပြည်တွင်းပြည်ပ ခရီးစဉ်တွေကို ဖော်ပြပေးနေလို့ ဒီ Nu Myat around the World page ကို Like လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိကြပါေ
Dr.Nu Myat Theingi Oo
(Nu Myat around the World)
September 3, 2015 September 3, 2015 Posted in Myanmar, Photo Essay, Street Photography, YangonTagged Fruits Vendor, Myanmar, Photo Essay, Road, Street Life, Street Photography, YangonLeaveacomment
Photo essay about the street life of fruits vendor and her3years old little daughter from Yangon, Myanmar
Kit Kit isasweet little three-year-old girl whose mother isafruit seller specialising in bananas in downtown Yangon, Myanmar. Every day, from morning till night, she follows her mother selling fruits at the corner of Mahabandoola Road and 27th Street. Her mother moved to the city with Kit Kit last year to make money, while her father and older brother still live inanearby village.
Kit Kit and her mummy love each other very much. She helps her mother in every way she can and her mother supports her in everything she needs as much as she can. She loves eating bananas and bananas have become part of her life. While her mother is selling fruit, Kit Kit likes to play nearby. She’s the sweetheart of all the neighbouring vendors and shopkeepers.
Sometimes, she laughs till her heart beats. Sometimes she cries till her heart hurts. While she loves the banana shop – it’s likeaplayground to her – sometimes she gets bored of staying there the whole day. No matter what, she is happy to follow her mother as she loves her so much and, of course, the bananas, too.
August 29, 2015 April 21, 2021 Posted in Myanmar, TravelTagged adventure, Cave, deedoke, mandalay, Myanmar, Nature, Nu Myat around the World, TravelLeaveacomment
ဒီးဒုတ်ရေပြာအိုင်နဲ့ရေတံခွန်သွားရာမှာ တောင်တက်လမ်းအတိုင်း တစ်နာရီကျော်ကြာ တက်သွားလိုက်ရင် ရေတံခွန်အဆင့်ဆင့်ကျော်သွားပြီးနောက် တောင်ထိပ်နားမှာ ဒီးဒုတ်သဘာဝလှိုဏ်ဂူအဝကို ရောက်ပါလိမ့်မယ်။
လျှို လို ဂလိုင်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ သဘာဝလှိုဏ်ဂူကြီးဖြစ်လို့ ဂူထဲရောက်အောင် ကျောက်လှေကားကနေ ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဂူတွင်းမှာ ဖိုးသူတော် တစ်ပါး သီတင်းသုံးနေပြီး ဘုရားဆင်းတု အနည်းငယ်တွေ့ရပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးတွေ မသွယ်တန်းထားတာကြောင့် သဘာဝအလင်းရောင်နဲ့ သဘာဝအငွေ့အသက်တွေ လွှမ်းခြုံနေဆဲပါ။
ဂူတွင်းမှာ သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အိပ်ခန်းတွေ ဟောခန်းတွေတွေ့ခဲ့ရပြီး ကျောက်ဂူကြီးရဲ့ ဟိုးအတွင်းဘက်ထဲ ဆက်ဝင်သွားရင် လေးဘက်ထောက်ဝင်ရတဲ့ အလိုလိုပူနေတဲ့ အပူခန်း၊ အလိုလိုအေးနေတဲ့ အအေးခန်းနဲ့ကျောက်နဂါးရုပ်ကြီးတွေ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။